Maleeshiyaadka Godane Oo ka Baxay Kudhaa & Ciidamada Worlord Gaandi oo Kaabiga ku... | KEYDMEDIA ONLINE
Maleeshiyaadka Godane Oo ka Baxay Kudhaa & Ciidamada Worlord Gaandi oo Kaabiga ku…
Kismaayo (Keydmedia) - Wararka naga soo gaaraaya Deegaanka Jaziirada Kudhaa ee gobbolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in Maleeshiyaadkii Kooxda arxan laawasha Shabaabka ay halkaasi isaga huleeleen kadib cabsi iyo awood la'aan soo wajahday.
Kabixitaanka Maleeshiyaadka Shabaabka ee ku suggnaa Jaziirada Kudhaa ayaa ka timid kadib markii Ciidamada Dhagar-qabe Gaandi iyo kuwa Kenyaanka ah ee shalay qabsaday degmada Badhaadhe ay u soo dhaqaaqeen dhanka deegaanka Kudhaa taasoo keentay in Kooxihii Shabaabka ay halkaasi xalay saqdii dhexe isaga baxaan.
Deegaanka Kudhaa ee gobbolka Jubbada Hoose hada waa cidlo mana jirto cid hada gacanta ku haysa marka laga reebo Ciidamada isgarabsanaya oo wax yar u jira magaalaada oo doonaya in saacadaha soo socda ay la wareegaan.
Qof kamid ah dadka deegaanka Kudhaa ayaa khadka taleefoonka Keydmedia ugu sheegay in deegaanka Kudhaa ay hada tahay cidlo Maleeshiyaadkii halkaasi ku suggnaana ay xalay saqdii dhexe isaga baxeen.
Maleeshiyaadkii Shabaabka ee ka soo baxay deegaanka Kudhaa waxaa ay soo gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta Gobbolka Jubbada Hoose halkaasoo ay isku aruursanayaa.
Sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo saacadihii ugu dambeeyay ka jiray dhaq dhaqaaq xoog leh oo ay sameenayaan Maleeshiyaaka Shabaabka ee ka arrimiya ayadoona ay suura gal tahay in Shabaabku ay baneeyaan magaalada Kismaayo.
Wixii ku soo kordha kala soco Wararka Keydmedia oo iyadu u taagan soo tabinta Xaqiiqada dhabta ah ee dalka ka jira.